दलान नेपाल : गच्छदारको नया जेल जीवन
गच्छदारको नया जेल जीवन
निर्वाचनमा अप्रत्यासीत हार व्योहोरेपछि मधेशी पार्टीहरु भित्र खैलाबैला मचेको अनुभुती हुन्छन अचेल । र त्यसको सिधा तारोमा परेका छन शिर्ष नेतृत्वहरु । त्यही भएर होला बेलाबखत यी शिर्ष नेताहरु याहा बैठकमा छन त कहिले त्याहा बैठक गरेर यो वा त्यो गर्दै छन भनेर खबरहरु आउने गर्छन । तर पछिल्ला एक महिना देखि विजय गच्छदार के गर्दै छन ? कमै लाई थाहा होला कि उनी अचेल उनकै भाषमा भन्ने हो भन्ने जेल जीवन विताई रहेका छन ।
गच्छदार किन जेल जीवन विताईरहेको होला ? के उनले विगतमा गरेको भ्रष्टाचार वा अन्य केही अपराधिक कामका लागी ? यदी तपाई यस्तो सोच्नु हुन्छ भन्ने तपाई गलत हुनुहुन्छ । गच्छदारले अहिले जेल जीवन विताउनुको पछाडी विगतमा उनले आफनो स्वास्थ्य संग गरेको खेलवाडको सजाय स्वरुप जेलरुपी जीवन काटीरहेका छन ।
झण्डै १ महिना हुन लाग्यो सबै भन्दा ठुलो मधेशी पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार कसैसंग बोल्न पाएका छैनन । घाटीमा समस्या देखीएपछि गच्छदार वरिष्ट घांटी रोग विशेषज्ञ डा राकेश श्रीवास्तवसंग उपचार गराउन पुगे । डा. ले घाटीमा देखिएको समस्याको उनलाई अपरेशन गरेर १५ दिन सम्म नबोल्न भने, घाटीमा अली वढी नै समस्या भएकाले गच्छदारले नाई भन्न सकेन । वरु डाक्रले नै सुझाए, तपाई राजनिती गर्ने मान्छे, याहा नबोलीकन बस्न गाह्ै होला, त्यसैले विदेश तीरै जानुस १५ दिनका लागी उपचार गराएर फर्कनु । तर गच्छदारलाई त्यो सुझाव त्याी जायज लागेन, उनले भने, म विदेशमा गएर उचार गराउन थाले भने याहा मिडियाले नानाथरी लेख्न सुरु गर्छन । त्यसैले जे हुन्छ, म यही बसेर उपचार गराउछू र डाक्टरको सल्लाह बमोजीम कोईसंग बोल्दीन । त्यसपछि डाक्टरले अपरेशन गरेर भोकल रेस्टका लागी गच्छदारलाई सिफरिस गरे ।
त्यही सिफरिस अनुसार गच्छदार अहिले कसैसंग बोलेका छैन । मधेशी पार्टीहरु विच एकिकरण देखि २६ जनाको मनोयन हुदै आन्तरिक विवादले हट केक जस्तो देखिन्छ । तर गच्छदारलाई यो सबै कुराले खासै छोएको देख्दैनन । पछिल्ला केही दिन यता उनी दिउसो तिर पार्टी कार्यलय तिर पनि आकल झुकल देखिन्छ तर कसै संग बोलचाल हुदैन । त्यसतै केही पर्यो भने उनले कागजमा लेखेर बताउछन । आज बिहान दलानसंगको भेटमा उनले लेखेरै भने, म अहिले अर्को जेल जीवन बचीरहेका छु । यो अत्यन्तै गाहे छ, एउटा राजनिती व्यक्तिका लागी । हुनत म पहिला पनि पटक पटक जेलमा बसीसकेको छु । तर अहिले घरमै बसेर पनि कसैसंग बोल्न नपाउदा मलाई जेल भन्दा पनि वढी कठिनाई भइरहेको छ ।
५ बर्ष अघि सिंगापुरमा पनि गच्छदारको घाटीको अपरेशन गरिएको थियो तर डाक्टर सल्लाह बमोजीम त्यतीवेला उनी भोकल रेस्टमा बसेनन । पछि पनि खासै त्यसको नाकारात्मक अनुभुती भएनन उनलाई । तर दोस्रो संविधानसभाकै क्रममा उनको वास्तविक आवाज गुम्यो । निर्वाचन पछि काडमाडौ आउदा डाक्टर संग सल्लाह गर्दा फेरी उपचार गराएर भोकल रेस्टको विकल्प नभएको बताए । भर्खरै निर्वाचन सक्दाको धपेडी यता काठमाडौमा मधेशी राजनितीमा पाकिरहेको नयां नयां सम्भावना, सबैलाई त्याग्नु पर्ने बाध्यता आईलाग्यो गच्छदारको सामुने । र विगतमा स्वास्थ्य संग गरेको खेलवाडका कारण यसपटक उनी सबै लाई तत्काल त्यागेर स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखे । कतिपयले त उनकै भोकल रेस्टका कारण मधेशी पार्टीहरु विच पाक्ने कयौन नाया खेलहरु अचेल त्यतीकै थन्किरहेको बताउछन ।
Unknown November 28, 2014 at 3:05 PM